Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Moody's slashes Boeing ratings taliwala ny 737 MAX fatiantoka
Ny orinasam-pandraharahana amerikana sy serivisy ara-bola amerikana Moody dia nampihena ny naotiny ho an'ny Boeing sy ny Boeing Capital Corporation nanomboka ny A3 ka hatramin'ny Baa1 ary nampitandrina fa i Boeing sy ny zanany dia “mijanona amin'ny famerenana amin'ny fihenam-bidy.”
Ny maso ivoho amerikana naoty dia nanapotika ny laharam-pahamehan'ny trosa tsy voamarina ho an'ny Boeing aerospace amerikana amerikanina taorian'ny nitateran'ny orinasa ny fatiantoka ara-bola noho ny fametrahana ny lazany 737 MAX fiaramanidina.
Moody ny, iray amin'ireo masoivoho iraisam-pirenena malaza, na izany aza dia nanambara fa nahavita mitazona ny laharana fohy ao amin'ny Prime-2 ilay mpanamboatra fiaramanidina, izay tsy ovaovin'ny masoivoho mpampindram-bola amin'izao fotoana izao.
"Ny vola azon'i Boeing Q4 dia nanondro fandoroana vola be dia be tamin'ny taona 2020 noho ny nandrasana teo aloha, ny fitomboan'ny fiankinan-doha amin'ny famatsiam-bola ny fiantraikan'ny famerenana amin'ny laoniny ny programa MAX", hoy ny filoha lefitra zokiny an'i Moody, Jonathan Root, tamin'ny fanambarana iray. amin'ny zoma.
Manantena ny maso ivoho fa haharitra telo taona i Boeing hamerenana amin'ny laoniny ny rafitry ny famokarana ireo fiaramanidina MAX 737 tsy mendrika ary mila frais fanampiny izany. Na dia mahavita mahazo ny jiro maintso avy amin'ny mpandrindra ny fiaramanidina aza ny mpanamboatra fiaramanidina amin'ny tapaky ny lohataona, dia mbola hiteraka “fikorianam-bola maimaim-poana madiodio eo akaikin'ny $ 10 miliara amin'ny taona 2020”, hoy i Moody's.
"Ny fijerena ny fihenam-bidy dia hita taratra indrindra amin'ny fisalasalana momba ny fotoana hamoahan'ny US Federal Aviation Administration (FAA) ny MAX sy ny mety ho fiatraikany ara-bola amin'ny risika samihafa mifandraika amin'izany," hoy ny masoivoho. Nanampy izy fa ny fandaniana ara-bola mifandraika amin'ny fidiram-bola eran'izao tontolo izao dia mety hitarika fihenam-bidy amin'ny Baa2, satria mety hamoaka trosa bebe kokoa ny orinasa amerikana.
Tamin'ny Alarobia, nanambara i Boeing fa efa nanao izany very 636 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2019 - ny fatiantoka voalohany nanjo ny orinasa tao anatin'ny 22 taona - satria ny fiaramanidina fivarotany voalohany dia miorim-paka hatrany taorian'ny nahatafiditra azy nianjera roa nahafaty olona 346.